YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, May 01
တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဌကြီးတောင် ဂလို
အဘ ဥက္ကာကိုကို's photo.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/01/20130အကြံပြုခြင်း
နံနက်ခင်း ဂျာနယ်မှ တင်မြှောက်ထားသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း
Minmaha Bagan's photo.
စစ်အစိုးရဆိုသော ခေါင်းစဉ်၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် မြန်မာ စစ်အာဏာပိုင်များက ကျေးလက်ဒေသများတွင် သူတို့ကို သူတို့ မဟာ စစ်ဘုရင်ကြီးများသဖွယ် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး ထိုကျေးလက်ဒေသများတွင်၇ှိသော ရွာသူကြီးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်သူများအပေါ် သူတို့ အလိုရှိသလို အမှောက်အလှန် အမျိုးမျိုး လုပ်နေခဲ့ကြ၏။
တင်ပြထားသော ဆောင်းပါသည် နိုင်ငံတကာနှင့် လက်တွေ ဖြတ်သန်းနေရသူ အမျိုးသမီးတို့မှ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်များ အဖြစ်ပျက်များအား ကောက်နုတ်တင်ပြထားသော ခိုင်လုံသည့် သက်သေ အထောက်ထားများဖြစ်ပါသည်။
(တရုတ်နယ်စပ်မှ အကြွေပန်းများအကြောင်း စွန့်စား၇ိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံအထောက်ထားများနှင့် တိကျစွာ မကြာခင် တင်ပြပါဦးမည်)
သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၏ လူနာတိုကင်စနစ်အား တယ်လီဖုန်းဖြင့်သာ လက်ခံပါတော့မည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတို့၏ သောကပရိဒေဝမီးများကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီဖြေသိမ့်ပေးခဲ့ရင်း ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် ကာလ တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် သေရေး(နာရေး) ကိစ္စရပ်များကို အကူအညီပေးခဲ့ကြသကဲ့သို့ ကျန်ရစ်သူ (ရှင်သူ) များအတွက်လည်း တတ်စွမ်းသ၍ ဝိုင်းဝန်းကူညီလိုကြသဖြင့် ပထမ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား၌ ဆေးကူညီမှုကော်မတီတစ်ရပ်အား တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၇) ရက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့ မှစတင်ကာ ချို့တဲ့နွမ်းပါး၍ ခွဲစိတ်မွေးဖွားရန် လိုအပ်သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ (နှစ်သက်ကယ်တင် ရသောကုသိုလ်)နှင့် မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံ၊ အင်းစိန်ဆေးရုံ၊ စံပြဆေးရုံ၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း(ဂန္ဒီ)ဆေးရုံ၊ တောင်ဥက္ကလာပ(မိခင်နှင့်ကလေး)ဆေးရုံ၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း(ကြည့်မြင်တိုင်)ဆေးရုံ စသည့် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး (၆) ရုံတို့တွင် မည်သည့်ရောဂါ ဝေဒနာမဆို ကျား/မမရွေး၊ ကုသရန်လိုအပ်သော ချို့တဲ့နွမ်းပါး လူနာများအတွက် ခွဲခန်းစရိတ်အချို့အား ထောက်ပံ့ကူညီပေးသည့်အပြင် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ကလေးဆေးရုံနှင့် နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းဆေးရုံတို့အား ထပ်မံတိုးချဲ့ကာ ဆေးကူညီမှုများ ယနေ့ အချိန်ထိ ပံ့ပိုးပေးလျှက်ရှိပြီး ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂) ရက် တောင်သူလယ်သမားနေ့တွင် “သုခကုသိုလ် ဖြစ်ဆေးခန်း” အား သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ဗြဟ္မဝိဟာရကျောင်းတိုက်တွင်း၌ အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး အများပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေးအား အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်ကြီးများအပြင်၊ အရိုးအကြော၊ အရေ ပြား၊ ကင်ဆာ၊ သားဖွားမီးယပ်၊ နား - နှာခေါင်း - လည်ချောင်း၊ သွားနှင့်ခံတွင်း၊ ခွဲစိတ်၊ ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်များတို့မှ အလှည့်ကျ ကုသိုလ်ဖြစ် စမ်းသပ်ကုသပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ယခင် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသို့ လာရောက်၍ ဆေးဝါးကုသကြသော လူနာဦးရေ နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် တိုက်ရိုက်ကုသမှုစနစ်ဖြင့် စတင်ခဲ့သော်လည်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်မှ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်သို့ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၌ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာတွင် လူနာဦးရေ အဆမတန် များပြားလာခြင်းကြောင့် တစ်ရက်ကြိုတင်၍ တိုကင်ယူတန်းစီစနစ် ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် နေရာပွဲစားများ၊ နေရာရောင်းချမှုများ၊ အုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်မှုများ၊ ညအချိန်မတော် တိုကင်ရရှိရေးအတွက် ညအိပ်တန်းစီ စောင့်ဆိုင်းရာတွင် အရွယ်အရောက် အမျိုးသမီးများလည်း ပါဝင်ခဲ့ရာတွင် တိုကင်တန်းစီသည့် အမူးသမား များတို့၏ အနှောင့်အယှက်ရန်များ၊ လက်နက်ကိရိယာများဖြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ မော်တော်ယာဉ်လိုင်း ကား များ မှားယွင်း၍ စီးနင်းမှုများ အစရှိသည့် အမျိုးမျိုးသော အနှောင့်အယှက်များ အန္တရာယ်များတို့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရကြောင်း လူနာများတို့၏ ပြောကြားချက်များကြောင့် သိရှိခဲ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် ၇.၅.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့)မှစတင်၍ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသို့ ဆေးဝါးလာ ရောက်၍ ကုသလိုကြသော လူနာများတို့သည် တိုကင်တန်းစီ စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုတော့ချေ။ တယ်လီဖုန်း နံပါတ် ဝ၉ - ၈၅ဝ ၁၆၅၆ သို့ ဆက်သွယ်၍ တစ်ရက်ကြိုတင် တိုကင်ယူခြင်းအား လက်ခံဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည်။ ကုသိုလ်ဖြစ် ဆရာဝန်ကြီးများတို့မှ တာဝန်ယူ စမ်းသပ်ကြည့်ရှုနိုင်မည့် လူနာအရေအတွက်သာ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး ရဟန်းသံဃာများ၊ သီလရှင်များနှင့် အသက် (၇၅) နှစ်အထက် လူပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည် လည်း တယ်လီဖုန်းဖြင့်သာ တိုကင်ယူဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ တယ်လီဖုန်းဖြင့် တိုကင်ယူရာတွင် ပြသ မည့်လူနာ၏ အမည်၊အသက်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် နေရပ်လိပ်စာ(အပြည့်အစုံ)တို့အား ပြောကြားရမည် ဖြစ်သည်။ တိုကင်လက်ခံချိန်သည် နံနက် (၉းဝဝ) နာရီမှ (၁၁းဝဝ) နာရီ အထိသာဖြစ်သည်။ တယ်လီဖုန်း တစ်ကြိမ်လျှင် (သို့) တစ်ခါလျှင် လူနာတစ်ဦးသာ လက်ခံသွားမည် ဖြစ်သည့်အပြင် ၄င်းလူနာသည် တစ်ပါတ်လျှင် ရောဂါဝေဒနာတစ်မျိုး တစ်ကြိမ်သာ ပြသခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။ တယ်လီဖုန်းဖြင့် တိုကင်ယူ ထားသည့် လူနာသည် မိမိတို့လာရောက်ပြသရမည့် နေ့ရက်၊ အချိန်တွင် သန်းခေါင်စာရင်း (မူရင်း/မိတ္တူ)၊ မှတ်ပုံတင် (မူရင်း/ မိတ္တူ)၊ ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံစာ (သို့) ဧည့်စာရင်း (မူရင်း)တို့အား တစ်ပါးတည်း ယူဆောင်လာရန်လိုအပ်ပေသည်။ လူနာများသည် ဆရာဝန်ဖြင့် မပြသမှီ တစ်ရက်အတွက် သာကြိုတင်၍ တယ်လီဖုန်းဖြင့် တိုကင်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ရက်၊ သုံးရက်အတွက် ကြိုတင်၍ တိုကင်ယူ ဆောင်ခြင်းအား လက်ခံမည်မဟုတ်ပေ။ လူနာအချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်မရှိသော လူအချို့တို့၏ လူ့ကျင့်ဝတ်များ ဖောက်ဖျက်သည့်အတွက်ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ စည်းကမ်းများချမှတ် ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတွင် စေတနာရှင် ဆရာဝန်များတို့၏ အကြံပြုမေတ္တာရပ်ခံမှုကြောင့် တိုကင်တန်းစီ စနစ်အားဖျက်သိမ်းကာ တယ်လီဖုန်းဖြင့် တိုကင်လက်ခံမှု (စမ်းသပ်)အဖြစ် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ခဲ့ပါက ဆေးဝါးကုသရာတွင် နေပူမိုးရွာ၌ ညအိပ်စောင့်ဆိုင်း၍ တိုကင်ယူ ခြင်းမှ ကင်းဝေးပြီး တယ်လီဖုန်း တစ်ချက်ဆက်သွယ်ပြီး မိမိတို့၏ ရောဂါဝေဒနာများအား ကုသနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် လူနာများတို့သည် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းမှ ချမှတ်ထားရှိသည့် စည်းကမ်းချက် များအား စနစ်တကျလိုက်နာခြင်းဖြင့် ဆေးဝါးကုသကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ကျောင်းမနေသေးသော ၅ နှစ်အရွယ်ကလေး သတင်းစာ များ ကောင်းစွာဖတ်နေ
စာသင်ကြား ပေးခြင်း မရှိသေးသော ၅ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် တစ်ဦးမှ သတင်းစာ နှင့် အခြားသော စာများကို ကောင်းစွာ ဖတ်ပြနေ၍ မြင်တွေ့ရ သူတိုင်း အံ့အားသင့်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ မောင်စိုင်းနေတိုး သည် ယခုလက်ရှိ တောင်ကြီးမြို့တွင် နေထိုင်လျက် ရှိပြီး ဧပြီလ ၂၈ ရက်က တောင်ငူမြို့နယ် ၊ ကေတုမတီ မြို့သစ်သို့ မိသားစု နှင့်အတူ အလည် ရောက်ရှိစဉ် အဆိုပါ ထူးထူး ခြားခြား အဖြစ်ကို ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ " သူ ၄ နှစ်သား အရွယ်က တောင်ကြီးမှာ အပြင်ထွက်တော့ ဆိုင်းဘုတ် တစ်ခုကို ဖတ်တယ် ၊ ရောင်နီဦး အဆင့်မြင့် ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေး ဆိုပြီး သူဖတ်တယ် ၊ ကျွန်တော့် အထင် သူပြောသံ ကြားတာနဲ့ လိုက်ရွတ်တယ် လို့ပဲ အောက်မေ့ နေတာ ၊ အိမ်ရောက်တော့ ကပ်ထားတဲ့ မြန်မာပြည် မြေပုံကို ဒါက ကချင်ပြည်နယ် ၊ ကရင်ပြည်နယ် ၊ ကယား ပြည်နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ် ဆိုပြီး ထောက်ပြီး ပြောပြတော့ အံ့သြ သွားပါတယ် ၊ စာဆို တစ်လုံးမှ သင်ပေး ထားရတာ မရှိသေးပါဘူး .... " ဟု ဖခင် ဖြစ်သူက ပြောပြသည်။ အဆိုပါ ၄ နှစ်သား မောင်စိုင်းနေတိုး သည် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ တွင် ပါရှိသည့် စာသားများအား အမှားအယွင်း မရှိ ဖတ်ပြနေ သဖြင့် လာရောက် ကြည့်ရှုသူ အားလုံး အံ့အားသင့်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
"ဥက္ကံပဋိပက္ခအတွင်း သံသယရှိသူ ၁၈ ဦးကို ဖမ်းဆီး"
ဥက္ကံမြို့ပေါ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို အကြောင်းပြုပြီး ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေ လေးနာရီခွဲကနေ ညဆယ်နာရီကြားမှာ ဥက္ကံမြို့ ပတ်ဝန်းကျင်က ရတနာကုန်း ကျေးရွာ၊ ပနီပင်ကျေးရွာ၊ ခြောက်သဲကျေးရွာနဲ့ သဲကုန်းကျေးရွာများမှာ လူနေအိမ် ၇၇ လုံးကို လူအုပ်စုနဲ့ ဖျက်ဆီးခြင်း၊မီးရှိှု့ခြင်းများဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ဥက္ကံမြို့ပေါ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူအုပ်စုနဲ့ ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်များမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ မသင်္ကာသူ ၁၈ ဦးကို ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးလျှက်ရှိ ပါတယ်။
ဥက္ကံနယ်မြေမှာ အမှတ်(၂) ရဲတပ်ရင်းများကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့မှူး ရဲမှူးချုပ် သူရဘိုနီ ဦးစီးပြီး လုံခြုံ ရေးဆောင်ရွက်နေသလို နယ်မြေခံတပ်မတော်တပ်ရင်းများကလည်း လုံခြုံရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးရသတင်းများကို မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကထုတ်ပြန်ပေးသွားပါ့မယ်။
ဧပြီ ၃၀ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ဥက္ကံမြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခကို လှုံဆော်သူလို့ သံသယရှိတဲ့ ဒေသခံ ၁၈ ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးထားကြောင်း RFA က စုံစမ်းသိရပါတယ်။
သံသယရှိသူ ၁၈ ဦးကို မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ စစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာ နှစ်နေရာခွဲပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေ စတင်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဧပြီ ၃၀ ရက်ညနေပိုင်းမှာ ဥက္ကံမြို့ သကြားစက်ပတ်ဝန်းကျင်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ အများဆုံးနေထိုင်တဲ့ ရတနာကုန်း၊ပနီပင်၊ ခြောက်သဲနဲ့ သဲကုန်းကျေးရွာတွေက အိမ်ခြေ ၁၀၀ ကျော်ကို လူအုပ်စုလိုက် ဝင်ရောက် ဖျက်စီး၊မီးရှို့တာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အဲဒီနေရာတွေမှာ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတယ်လို့ ဥက္ကံမြို့က ရဲအရာရှိတစ်ဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။
ပဋိပက္ခတွေ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဥက္ကံမြို့မဈေးကို သုံးရက်ကြာ ပိတ်ထားလိုက်ပြီး၊ဥက္ကံမြို့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ကျေးရွာတွေကို ပုဒ်မ ၁၈၈ အမိန့်ထုတ်ပြန် ကြေညထားပါတယ်။
ဧပြီ ၃၀ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခကြောင့် ရန်ကုန်ဆေးရံကြီး ကို တင်ပို့ဆေးကုသမှု ခံယူစေတဲ့ ကိုတင်ဝင်း၊ကိုဇော်နိုင်နဲ့ကိုအီစမန်တို့ထဲက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကိုဇော်နိုင်က ရရှိတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဥက္ကံမြို့မှာ မနေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးကုသမှုခံယူနေရသူ ၁၀ ဦး ရှိတယ်လို့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
နံနက်ခင်း ဂျာနယ်မှ တင်မြှောက်ထားသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး...
ကျောင်းမနေသေးသော ၅ နှစ်အရွယ်ကလေး သတင်းစာ များ ကောင...